Shiinaha Customized bac Longchamp-saareyaasha, shirkado cusub, warshad - xigasho - Dongguan Zhihao Boorsada Warshadaha Co., Ltd.
Hoyga > Boorsada gacanta Boorsada gacanta > Bacda Longchamp
Boorsada maqaarka dhaqanka ee ragga, boorsada garabka ragga oo leh madow iyo clamshell clasphell ayaa ahmiyada la siiyaa, waxaan si geesinimo leh isugu dayi karnaa qaababka qurxinta si loo jabiyo caajisnimada, gacmo qabashada sidoo kale waa la xiri karaa si kor loogu qaado dareenka isku duubnaanta.
1. Hordhaca alaabta boorsada:
Boorsada maqaarka ee caadiga ah ee ragga, boorsada garabka ragga oo leh madow iyo clamshell classhell ayaa ahmiyada la siiyaa, waxaan si geesinimo leh isugu dayi karnaa qaababka qurxinta si aan u jabino caajisnimada, gacmo qabashada sidoo kale waa la xiri karaa si kor loogu qaado dareenka isku duubnaanta. boorso nin taas oo isku qurxan isla waqtigaas. Waxa kaliya ee aad ubaahantahay waa boorso midab dhalaalaya u leh isaga Samee dadaal kasta oo aad ku koobnaan karto kuna fududaan karto tusaalaha, muuji dareenka qadka labka ah, inta isku xirnaanta ay macquul tahay, dhib malahan safarka ama madadaalada aad bey u khuseysaa.
3. Sida loo qaado bacda?
Marka lagu daro fiiro gaar ah qaabka, sidoo kale waa muhiim in la doorto boorsada. Waa kuwan talooyin kooban:
(1) dooro boorsada si aad u tixgeliso dhererka.
Haddii kale, dhabarka ayaa saameyn ku yeelan doona saameynta isku-ururinta Guud ahaan, dhererka ka sarreeya 165cm, sida boorsada joornaalka cabbirka joornaalka ayaa la doorbidi karaa; Haddii aad ka hooseyso 165cm, waxaad marka hore dooran kartaa boorsada yar.
(2)dooro boorso si aad u tixgeliso sawirka.
Sabab la'aan, waxaan aaminsanahay in dad badan oo khibrad leh ay tixgelin doonaan qodobkaan, guud ahaan, dheer iyo dhuubanba waxay ku habboon yihiin boorsooyin waaweyn, laakiin boorsooyinka yaryar sidoo kale waa ikhtiyaari. , waa inaad had iyo jeer doorataa boorsada gacanta oo yar, maxaa yeelay waxay kaa dhigeysaa xitaa inaad ka yartahay.
(3)Xulo xirmada si aad uga fiirsato munaasabadda.
Munaasabadaha kala duwan, dharka kala duwan, boorsooyinka u dhigma waa inay kala duwanaadaan Guud ahaan, munaasabadaha rasmiga ah, sida xafladaha is biirsaday, xafladaha fiidkii, taariikhda indhoolaha, si loo doorto shaqo wanaag, boorsooyin tayo sare leh, haddii kale, waxay u muuqdaan kuwo aad u daxalaysan, waxay saameyn ku yeelan doonaan sawirka. isticmaalka maalin kasta, shandad shaashad caadi ah oo aan caadi ahayn ayaa ah xulasho wanaagsan.
5. Boorsada boorsada iyo geynta
Calaamadaha kulul: Bacda Longchamp, Shiinaha, soosaarayaasha, alaab-qeybiyeyaasha, warshad, habeysan, qiimaha, oraahda, keydka